घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू डेरामा ग्रे ग्रे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नाम "खैरो". हाम्रो डेमराई ग्रे बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्नका साथै समावेश छ।
हो, सबैले उनको गति, डिलबलिङ र प्रविधिको बारे जान्दछन् जसले उनलाई इंग्ल्याण्डमा सबैभन्दा छिटो फुटबल खेलाडी बनाउँछ। तथापि, केवल डेराका ग्रेको जीवनीमा मात्र केहि विचार छ जो धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
डेमराई रेमेले ग्रे मा जन्मिएको थियो 28 को 1996th जुन बर्मिंघम, युनाइटेड किंग्डम। ग्रे बाट उसको मूल छ जमैका उनीहरूको आमाबाबुलाई सीधा जमैकन जडहरू धन्यवाद। यसको मतलब उहाँ लेखनको समयमा अझै पनि जमैकाका लागि खेल्न योग्य हुनुहुन्छ।
डेमराई ग्रे एक ब्रिटिश जमैकन संस्कृति संग मध्य-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ जुन त्यो सँगी ब्रिटिश जमैकन जस्तो देखिएको जस्तो फरक छैन; डैनियल स्ट्रिज, Theo Walcott, एलेक्स ओक्सलेड-चम्बेर्लेन, Raheem Sterling, केली वाकर, डैनी गुलाब र क्रिस सानो.
खैरो बहन - ट्विटरमा क्रेडिट
आफ्नो बच्चा बहिनीको साथ बढ्दै गर्दा, ग्रेले फ्रान्कल हाई स्कूललाई ​​सहभागी गरे जहाँ उनले प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्न शुरु गरे जुन उनले विद्यालयको घण्टा पछि विस्तार गरे। प्रारम्भिक फुटबल गतिविधिहरूले लाभांश भुक्तानी गरेपछि यसले क्यारियरको नेतृत्व गर्यो।
फ्रैंकली हाई स्कूल संग उनको समय देखि पहिले, डेमराई ग्रेले आफ्नो शहर को स्थानीय युवा टीम संग कैडबरी एथलेटिक को जूनियर टीमहरु संग खेलना शुरू गर्यो। उनले क्लबसँग प्रभाव पारेका थिए जसले बर्मिंघम एकेडेमीसँग छात्रवृत्ति अवसर जिते।
खैरो अन्तर्गत 11 को रूपमा ब्लुज अकादमीमा सामेल हुनुभयो। लाइन तल, उहाँले भेट्नुभयो र सँगै साथी बन्नुभयो नाथन रेडमंड जसलाई तिनले एक पटक आफ्नो युवा क्यारियरमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव मान्ने गर्थे।
नाथन रेडमोन संग डेमररा ग्रे को शुरुवात क्यारियर मित्रता। Pinterest र बर्मिंघम पोस्ट को क्रेडिट।
बुलबुले, शांत र खुसी ग्रेले आफ्नो फुटबल छात्रवृत्तिलाई 2012 सम्म जारी राख्यो। उनको प्रदर्शनको अर्को सिजन (2013-2014) ले उनलाई क्लबको अकादमी प्लेयर सीजन पुरस्कार प्रदान गर्यो।
डेमराई ग्रे रोड अफ फेम (बीबीसी को क्रडिट)
त्यस सिजनले पनि बर्मामहिमको पहिलो टोलीलाई बढावा गरिरहेको छ जहाँ उनले नियमित स्टार्टर हुन प्रतिस्पर्धा गरे।
बर्मिंघम पहिलो टोलीमा हुँदा, ग्रेले संयुक्त संयुक्त अस्वीकार फेडरिको Macheda संग पहिलो-टोली भूमिकाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। यो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो जसले ग्रे कोरे आउट गर्यो र Macheda क्लब छोडेर।
यो एक समय थियो जब बर्मिंघम क्लबको प्रबन्धमा विश्वास थियो कि उनीहरूले परिपक्वताको वृद्धि देखाउँदै थिए। खैरो भत्किएको रेकर्डको मौसममा निम्न मौसम 2014-2015 जसले उहाँलाई तीनवटा ट्राफिकहरू जिते; डिसेम्बर 2014, बर्मिंघम सिटी गोल र 2014-2015 सिजनको खेलाडीको लागि फुटबल लीग युवा खेलाडी।
ग्रेको क्लिनिकल परिष्करण र सुरक्षामा ढाक्ने क्षमतालाई उनीहरूको रिलीज क्लोज सक्रिय गर्ने प्रिमियर लिग ट्रफी चेसर्स लिसेस्टर शहरले नपढेको थिएन। ग्रे 4th को 2016th मा लीग च्याम्पियंस संग जुडें र उनको प्रीमियर लीग मुकुट को सुरक्षित मा उनको टीम को मदद मिले।
डेमराई ग्रेको प्रिमियर लिग होल्डर्स (प्रिमियर लिगको क्रेडिट)
बाक्लो, जुन तिनीहरू भन्नुहुन्छ इतिहास हो।
डेमराई ग्रे डेटिङ को हो?
डेमराई ग्रेको गर्लफ्रेंड- अनर्थ तथ्यहरू (Instagram को लागि क्रेडिट)
ग्रे को सम्भवतः छिपा रोमान्स एक व्यक्ति हो जुन सार्वजनिक आँखा को जांच पछि बचाउँछ किनकी उनको प्रेम जीवन धेरै निजी र संभवतः नाटक मुक्त छ। लेखन को समयमा ग्रे को निर्णय उनको जीवन मा कुनै पनि जानकारी नहीं बनाउन को निर्णय लिया छ।
उनले एक पटक आफ्नी श्रीमतीको बारेमा प्रश्नको जवाफ दिन साक्षात्कार अनुरोध दिए। तल साक्षात्कार सत्र हो।
द डेमराई ग्रे धोखाधारी मृत्यु:
तपाईंलाई थाँहा थियो?… डेमराई ग्रेले एकपटक हेलिकप्टरको मृत्यु पछि लिकेस्टर सिटीको प्यान अवार्डको यात्रामा एक हेलिकप्टरको ब्लेडसँग नजिक नखोजेको थियो।
डेमराई ग्रेको धोखा दिइने दिन (फेमफ्लूनेट.इन .मा क्रेडिट)
ब्लेड वायु सेनाको शक्तिको कारण, ब्रिटिश जमैकनलाई हटाइएको थियो किनभने त्यो लगभग हेलीकॉप्टरको पूरै रोटर ब्लेडमा हिंड्यो। हेलिकप्टर कर्मचारी सदस्यको द्रुत हस्तक्षेपले घातक दुर्घटनालाई रोक्न मद्दत गर्यो। भिडियो घटना हेर्नुहोस्।
उनले एक पल्ट एक लेथली हिप्सी क्रैक लाई साढे:
घटना एलेटनमा लिसेस्टर प्राइम लिग पराजित भएपछि भयो। यो क्षणमा बर्मिंघम जन्मेको थियो त्यो फुटबलरले आफूलाई सम्भावित घातक नाइट्रस ओक्साइडलाई हटाउँदछ, जसलाई 'हिप्पी दरार'।
डेमराई ग्रे फिलिमहरू आफैं हिप्सी क्रिकमा हाल्छन् (क्रेडिटको दर्पण)
पदार्थ हटाउन पछि खैरो स्न्यापतमा भ्रामक भिडियो पोस्ट गर्ने निर्णय भयो।
यद्यपि, यो कानूनी हो कि उच्च तर ब्रिटिश औषधी-औषधि एजेन्सीहरूलाई चेतावनी दिईएको छ कि ग्यासलाई ओक्सीजनको मस्तिष्कबाट बच्न सक्छ र मार्न सक्छ।
एक शरारत Victim:
पिडाबाट डेरामा ग्रेको जीवनशैली जान्न निश्चित हुन्छ निश्चित रूपमा उनीहरूको पूर्ण चित्र निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
यस अनुसार दर्पण, Premiership विजेता Demarai ग्रे आफ्नो ब्ल्याम लाम्बो संग आफ्नो प्रीमियर लीग शीर्षक मनाईयो।
उनले फुटबलरको प्रकार होइन, जो लाशिस लाइभ लाइभलाई सजिलै कार र डुप्लेक्सिसको मुट्ठीले सजिलै ध्यान दिन्छन्।
यद्यपि तपाईंले आफ्नो दरार गल्ती र हेलीकाप्टर सुरक्षा गल्तीहरूको बारेमा पढ्नु पर्छ। तर जान्नको लागि डेराारी ग्रीनको व्यक्तिगत जीवनले तपाईंलाई सहयोग पुर्याउनेछ कि उसको सम्पूर्ण चित्र प्राप्त गर्नेछ। हामी अघि बढ्नु अघि, प्रश्न सोध्न दिनुहोस्।
तपाईंको मनमा कस्तो प्रकारका विशेषताहरू आउँछ जब तपाई आधुनिक-दिनका फुटबल फुटबलरको विचार गर्नुहुन्छ?
तपाईंले एक ज्वालामुखी व्यक्तित्वको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। तर डेमराई ग्रे एक न्यानो मनपर्ने व्यक्ति हो जसले संसारलाई राम्रो स्थान बनाउनको लागि आफ्नो समय र पैसा लगानी गर्न मन लाग्छ।
डेमराई ग्रेको व्यक्तित्व (इन्स्टाग्रामको क्रेडिट)
खैरो संधै धैर्य काममा संलग्न भएको छ। उनीहरुमध्ये बच्चाहरु को अस्पताल को लागि पैसा कमाई र बीमार को भ्रमण गर्न प्यार गर्दछ। यो युनिसेफ युनिभर्सिटीका एक राजदूत आइपुग्दा यो समय मात्र हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Demarai ग्रे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
डेनी इन्ग्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य